Libya inyika iri kumaodzanyemba kweAfrica. Nyika yeLibya yakakombwa negungwa Mediterranean riri kumaodzanyemba, Egypt iri kumabvazuva, Sudan iri kumabvazuva kwadziva kuchambembe, Chad neNiger dziri kuchamhembe, uye Algeria neTunisia dziri kumadokero. Nyika yeLibya ndiyo yegumi nenomwe pahukuru kwenharaunda; Libya ine nharaunda yakakura mamiriyoni 1.8 eskweya rekiromita.
Gutaguru reLibya rinonzi Tripoli rine hugari hwevanhu mamiriyoni 1.7 nyika yese ine hugari hwevanhu mamiriyoni 6.4 chete. Pahupfumi hwemandayebwe Libya ndiyo yegumi (10th) pahupfumi hunozivikanwa, uye ndiyo yegumi nenomwe pakuburitsa mafutarubwe.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Libya&oldid=63295"
This page was last edited on 23 Kubvumbi 2019, at 15:02.